Shirkadda Ethiopian Airlines oo joojisay inay tagto 30 dal oo Somalia ka mid tahay. (Akhriso Liiska) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Shirkadda Ethiopian Airlines oo joojisay inay tagto 30 dal oo Somalia ka mid tahay. (Akhriso Liiska)
Shirkadda Diyaaradaha Ethiopian Airlines (Ethiopian) ayaa ku dhawaaqday liiska 30 dal oo ay joojisay inay duulimaad ku tagto oo ay Soomaaliya ka mid tahay, kadib amarro kasoo baxay dowladaha dalalkaasi oo looga hortegayo faafista cudurka Coronavirus.
Liiska dalalka aysan tegi doonin diyaaradaha shirkadda Ethiopian airlines waxaa ka mida dalal badan oo Afrika Yurub iyo Asia ku yaalla. Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta ku dhawaaqay in dhammaan rakaabka imaanaya dalka Itoobiya la gelin doono 14 maalmood oo karantiil ah, waxaana la xiray Baararka iyo goobaha lagu caweeyo.
Previous articleWasiir Beyle: “Ishii buktaay ku bikaacso..” Jawaab kulul oo ku socota Aqoonyahan & Siyaasiyiin dhaliilay.. (Daawo)
Next articleWasaaradda Caafimaadka oo War Cusub soo saartay. (Soomaalida ka imaaneysa 14 dal oo la karaantiilayo)